Nke a bụ ihe ndị mmadụ na-ekwu maka nkasi obi mmiri
: Ọ bụrụ na onye isi ala Bush na-aga n'ihu, John Bolton ga-arụ ọrụ dị ka onye nnọchi anya na United States. N. Site na 2007 ruo Jenụwarị, okwu ọgbakọ dị ugbu a gwụchara. Elaine Quigano nke CNN, White House. (Ikpeazụ vidiyo) Nke a bụ CNN News Center. Onye isi ala onye Sudan nwụrụ. Ọ na-abụ onye ndu Rubn na onye bụbu onye bụ onye bụbu. Ọ na-efe efe site na helikọfter mgbe ọ gara njem iji zute onye isi ala Ugandan.
Biko kwuo na ahụmịhe gị. Mee ka mmadụ niile mara ihe dị mma ma na-arụ ọrụ nke ọma!
N'ime ya, ma ọ bụ ma ọ bụ nwee nkwekọrịta nke nkwekọrịta ọ bụla dị na arụrụala, onye nwe ụlọ ma ọ bụ onye nnọchi anya ma ọ bụ na-akwado ndị niile nọ n'ụlọ ọrụ na-enweghị mkpa a ga-ekpe maka ebumnuche a, a ga-akwụghachi ụgwọ ụlọ na nkwekọrịta a na-echekwa na nkwekọrịta a, onye nwe ụlọ nwere ike ịgbazite ụlọ ahụ Onye bi n'ụlọ ahụ, na-ejigide ikike iji gbazite ụlọ ahụ ogologo oge karịa oge a na-agbazinye ego, enweghị ego ọ bụla ka a ga-eji ụgwọ maka nrụghachi ma ọ bụ inweta , na nke abụọ maka mweghachi nke ụlọ ahụ n'ụlọ ịgbazite ego, mgbazinye na mmefu niile na-akwụ ụgwọ na ụgwọ ọ bụla, onye ga-aza ajụjụ ndị ọzọ y na-eme ntụpọ n'ime oge mgbazinye a.